ORINASA SECREN : Lasa entina handotoana ny tale ankehitriny ny olan’ireo mpiasa misotro ronono
Misedra olana ireo mpiasa misotro ronono tao amin’ny orinasa Secren. Ny tsy fahafahana mandoa ny latsakemboka tamin’ny Cnaps no fantatra fa nahatonga ny olana misy. 9 octobre 2018
Tsara marihina fa tsy vao omaly na androany no nisian’ izany olana izany fa efa ho 17 taona lasa izay, araka ny fanangonam-baovao natao maha-kasika izany. Fantatra fa nanomboka ny taona 2001 no efa nisedra olana mahakasika ireo mpiasa misotro ronono tao amin’ity orinasa ity. Tsiahivina fa i Gara Jean Robert no tale jeneralin’ ity orinasa ity tamin’ izany fotoana izany.
Ary ity farany no voatendry ho governora taty Antsiranana. Taorian’ny raharaha tamin’ny taona 2002 dia indroa no efa nosoloina ny tale jerenalin’ny orinasa Secren, izay nahitana an’i Solohery sy Ratompokolahy Abou Bakary. Ity farany no nanao famindram-pitantanana ny taona 2013 tamin’ny tale jeneraly ankehitriny Ntsay Louis Abel. Araka ny fanadihadiana natao hatrany dia amina miliara ny vola tokony haloa amin’ny Cnaps, izay latsakemboka alaina amin’ny karaman’ireo mpiasa nefa tsy nisy nandrotsaka ireo tale nifandimby voalaza etsy ambony.
Tamin’ny taona 2015 no fantatra fa nisy ampahany naloa tao amin’ny Cnaps, ka ny tale jeneraly amperinasa no nanao ezaka nandoa izany.
Tsy takona afenina ny olana nolalovan’ny orinasa Secren, izay mbola ao anatin’ny fanarenana izany hatrany ny mpitantana ankehitriny. Ny zava-misy anefa dia lasa "izay tsy namono biby indray no nifoteran’ny rambony". Azo adika fa lasa nataon’ny sasany ho fitaovana politika entina hanosoram-potaka sy handotoana ny tale jeneraly ankehitriny ny olan’ireo mpiasa misotro ronono tao amin’ny Secren. Satria natao ventin-dresaka sady itarainana amin’ny mpanao politika. Tahaka izay nitranga teo anoloan’ny Ritz ny alahady 7 oktobra folakandro teo, tamin’ny fandalovan’ny kandida Roland Ratsiraka taty Antsiranana. Tsara ampahafantarina amin’ireto farany fa tsy vao izao no nisian’ny olana mahakasika ireo mpisotro ronono tao amin’ny Secren ireo. Ny azo anontaniana dia ny nanaovana ireo latsakemboka tokony naloa tamin’ny Cnaps nanomboka ny taona 2001 hatramin’ny taona 2013. Ny zava-misy dia finaritra ny manoso-potaka, amin’izay heverina fa nahavita nanao ezaka nanarina ny orinasa ny fihetsika ataon’ ireo mpiasa misotro ronono, izay voarangitr’ireo mpanao politika sasantsasany.
Anisany orinasa saika hilentika tahaka izay nahazo ny orinasa Sirama ny orinasa Secren, ka tsy vitsy ireo mpiasa ao amin’ny Secren, ireo ray aman-dreny an-tanàna no midera ny ezaka vitan’ ny tale jeneraly ankehitriny, satria tsy nikatona ilay orinasa reharehan’ny tanànan’ Antsiranana. Azo porofoina amin’izany fa manomboka miverina tsikelikely ireo mpanamboatra sambo ao anatin’ ny dobo raboub Secren amin’izao fotoana, raha nihemotra izany teo aloha.
Ny fiverenan’ireo mpiara-miombon’antoka avy any ivelany, tsy vitsy ihany koa ireo fitaovana vaovao nasolo izay efa antitra sy ny maro hafa. Raha ny olan’ireo mpiasa misotro ronono tao amin’ny orinasa Secren no resahina dia nanomboka ny taona 2001, fa tsy ny fanosoram-potaka mamadika izany ho fitaovana politika no hamaha ny olana.
Na eo aza ny resaka misy dia mitohy hatrany amin’ny fitadiavam-bahaolana mahakasika izany no ataon’ ny tompon’ andraikitra ankehitriny, izay azo alain-tahaka raha misy ny fifandimbiasan-toerana mba hialana amin’ny olana misy hatrizay.
Ny fanontaniana mipetraka dia hoe "lasa aiza, natao inona, ireo latsakemboka nalaina tamin’ny karaman’ny mpiasa nataon’ny mpitantana izay nanombohan’ny olana misy ?" Anjaran’ireo mpanao politika manao fitaovana ireo mpiasa misotro ronono ireo no tokony hikaroka ny fototra nahatonga ny olana.